Kanumaan wal-qabatee “Yemusliim Guddaayooch – jechuun, Dhimmoota Musliimaa” gaazzexaa jedhamuuf qopheessaa ol’aanaa ka ture – gaazzexeessaa YOOSEEF GETAACHEW, hidhaa waggoota afurii tii booda gad-lakkisamuu isaatti ka gammade ta’uu --- gareen mirga gaazzexeessotaaf galmu – CPJ-n beeksisee jira. “Yooseef, duraanuu hidhamuun irra hin turre” jedha – gareen kun.
Maatiileen hoogganoota Koongiresa Federaalawa Oromoo yeroo ammaa mana hidhaa jiranii, namoota isaanii mana-hidhaa Qilinxoo, kaan immoo mooraa Baatuu jiran ijaan arguu isaanii dubbatan iyyuu, “garuu, haalli itti namoota keenya arginuu fi yeroon waliin turru jijjiiramee jira” jedhu, maatiileen kun.
Eega Hagayya ja’a ibiddii fi dhukaasni mooraa Hidhaa Qilixoo keessatti ka’ee lubbuu hidhamtoota hedduu galaafatee booda har’a yeroo jalqabaatiif namoota isaanii arguu isaanii ti – maatiileen kun. Akka qajeelfama haaraatti, “hidhamaan tokko yeroo tokkotti maatii keessaa nam-tokko qofa wajjiin wal-arguu danda’a. Maatiin harka fuudhee dubbisuu irraa kan hafe fira isaa hidhame waliin homaa dubbachuu hin danda’u. Ka duraan maatiin haga daqiiqaa 30 illee finna isaa waliin turu, amma daqiiqaa lama caalaa turuu hin danda’u” jechuudhaan, jijjiirama amma tahe ibsan. Kan har’a mooraa hidhaa Baatuu deebi’anii deeman haati-warraa Obbo Dastaa Dinqaa, abbaan-manaa isaanii “haalli isaa jijjiiramee, ergaramee, miilla duwwaa, fiddoo fi qomee harka gabaabduu qofa uffatee natti dhufe. Torban tokko caalaaf akkanumatti ture” jedhan.
Daarektarri sab-qunnamtii kan manneen sirreessaa Itiyoophiyaa obboo Gizaaw Tasammaa himannaa maatiileen dhiheessan kana ilaalchisee gafatamanii "ani waanan beeku hin qabu, amma sirraa dhagahuu kooti" jechuudhan VOAti himanii jiru.
Gabaasaa guutuu kana cuqaasuun dhaggeffadhaa.